“Amin’ny Maha-zatovo Tompotany Anay, Manan-jo Hilaza Ny Hevitray Horenesina Izahay” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2017 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, عربي, Ελληνικά, 繁體中文, русский, English
Mpitarika tanora iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny ao Sarayaku, Ekoadaoro i Abigail Gualinga.
Milaza amiko ity sary ity fa tsy manome lanja ny tanora tompotany ny fampahalalam-baovao eto aminay ary manan-jo hilaza ny hevitray izahay.
Te hanao zavatra maro ho an'ny vondrom-piarahamoninay izahay ary manana hevitra marobe. Tianay ihany koa ny mianatra hatrany bebe kokoa ary handray anjara amin'ny lohahevitra samihafa izay mifandraika aminay, kanefa hitako rehefa mijery ity sary ity aho fa tsy misy toerana malalaka ho anay ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra: tsy hita eto akory ny teny hoe “tanora”.
Eto amin'ity andiana hevi-dehibe marobe ity izay mifandray amin'ny hoe “indígena” ao amin'ny fanangonam-baovao Ekoadaoreana teo anelanelan'ny volana Janoary 2016 sy Janoary 2017, tsy hita ny teny mifandraika amin'ny “tanora” (jóvenes) . Sary: Media Cloud (Jereo ny sary lehibe kokoa).
Mila sehatra maromaro ahafahan'ny tanora mandray anjara sy ilazanay ny hevitray izahay satria izahaydia manana zavatra maro holazaina sy atolotra ihany koa. Mila mitady fomba vaovao mba hanomezana hery ireo tanora handray anjara amin'ny hetsika izay nataon'ireo zokiolona sy ireo mpitarika hafa avy ao amin'ny vondrom-piarahamoninay izahay, mba ahafahanay manohy ny lova navelan'izy ireo sy ahafahanay mamelona hatrany ny asa izay efa vita hatramin'izao. Raha tsy izany, hahatsiaro ho voahilika ireo tanora ao amin'ny tolona iraisana izay mitranga amin'izao fotoana izao, ary mety ho very ny asa rehetra izay efa vita rehefa mandeha ny fotoana.
Tokony hisoroka izany mba tsy hitranga izahay amin'ny alàlan'ny fikarohana vahaolana mba hampifandraisana ireo taranaka hifanakaiky kokoa, mba ahafahan'ny olona tsirairay avy amin'ny sokajin-taona rehetra miara-miasa amin'ny lohahevitra izay manan-danja ho an'ny vondrom-piarahamonina, ary amin'ireo olana izay misy fiantraikany amintsika rehetra.
Atrikasan'ny tanora tao Sarayaku. Sary avy amin'i Abigail Gualinga.
Ity dia ampahany amin'ny andian-tantara Rising Frames izay novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina indizeny ao Sarayaku sy ny teratany Shuar, izay samy any amin'ny faritr'i Amazonia ao Ekoadaoro avokoa. Ny vahoaka Sarayaku sy Shuar dia niady teo amin'ny sehatra iraisampirenena sy nasionaly mba hampitsaharana ny tetikasam-pitrandrahana ao amin'ny faritaniny, ary ny ampahany lehibe tamin'ny tolona nataony dia tamin'ny fandefasan-kafatra ho an'ny vahoaka [mg]. Nangataka tamin'ireo mpikambana izahay mba hamaly ny fandalinan'ny fampitam-baovao izay nangataka ny fomba anehoana ny lohahevitra mifandraika amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ao amin'ny vaovao.
Nohamarinin'i Belen Febres-Cordero ny fitsipi-panoratan'ity lahatsoratra ity sy ny fitsipi-pitenenana ao aminy.